Guddiga Farsamada ee Doorashooyinka oo kulamadii u horreeyay ka bilaabay Muqdisho | Jowhar Somali news Leader
Home News Guddiga Farsamada ee Doorashooyinka oo kulamadii u horreeyay ka bilaabay Muqdisho
Guddiga Farsamada ee Doorashooyinka oo kulamadii u horreeyay ka bilaabay Muqdisho
Guddiga Farsamada ee ka baaraan-dagista arrimaha doorashooyinka 2020/21 ayaa kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho, ka hor shirka Dhuusamareeb 3 ee lagu wado inuu dhowaan furmo.
Guddigan oo ay xubno ka yihiin dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa shirarkooda Muqdisho ahaa kuwo gaar gaar ah oo isugu jiray kuwo dhexdooda iyo kulamo shalay ay la qaateen Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada sida Galmudug iyo Koofur Galbeed.
Sii Hayaha xilka Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac ayaa ka warbixiyay kulamadii u dambeeyay ee ay dhowaan yeesheen, isagoo xusay inay isla meel dhigeen qorshayaal kumeel gaar ah oo ay ku wada shaqeeyaan iyo talooyin farsamo ay uga keenaan arrimaha doorashooyinka.
Saalax Axmed jaamac ayaa sheegay in wadatashi ay la yeeshaan daneenayaasha kala duwan, si talooyin wax ku ool ah uga keenaan arrimaha doorashooyinka si Madaxda ay go’aamo uga gaaraan marka la isugu yimaado Dhuusamareeb.
Waxaa uu sheegay inay kulamo la qaateen Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koofur Galbeed, sidoo kale ay is wareysteen Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in maanta oo Khamiis ah la kulmi doonaan Xisbiyada dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, ka hor inta aanay u ambabixin magaalada Dhuusamareeb, si ay talooyinkooda u dhageystaan.
Guddiga farsamo ee ka soo baaraan-dagaya doorashooyinka ee Muqdisho shirarka ku leh ayaa waxaa ka maqan xubnihii matalayay Puntland iyo Jubbaland, waxaana laga yaabaa in marka ay Dhuusamareeb tagaan inay ku soo biiraan.